Zimbabwe has generated US$64.4 million from the sale of tobacco in the past 16 days. Photo: Tobacco Industry and Marketing Board (TIMB)
RUSTENBURG - Zimbabwe has raked in US$64.4 million from the sale of 28.2 million kilograms of tobacco in 16 days compared with last year, Zimbabwe media reported, citing statistics released by the Tobacco Industry and Marketing Board (TIMB).
The Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) reported that TIMB's Covid-19 regulations, which demand decentralisation of tobacco auction floors for the current season, have been a blessing in disguise for farmers in Karoi, who said the move has cut unnecessary transport costs on their part.
Meanwhile, Malawian media reported that Zimbabwe's newly licensed tobacco buyer, Voedsel Tobacco Company, was yet to start buying the leaf four weeks after the official opening of the 2020 marketing season.
"The issue is Covid-19, which has resulted in their country (Zimbabwe) implementing a lockdown, but I am actually writing them today on the same.”